चलचित्र हेर्न सुन्धारास्थित सिभिल मल पुगेका कोटेश्वरका दीपक अवालेको आँखामा अचानक मानवजस्तो देखिने ठूलो आकृति ठोक्किन्छ । अचम्म मान्दै उनी एकछिन रोकिन्छन् । मूर्तिको दायाँ–बायाँ नियाल्छन् । अलमलमा पर्छन् । केही बेरमा भेउ पाएपछि भन्छन्, ‘भिजिट नेपाल–२०२० सँग सम्बन्धित मूर्ति पो रहेछ ।’
न्युरोडकी सुमन श्रेष्ठ मलमा राखिएको मानव आकृतिसँग रमाइरहेको अवस्थामा भेटिइन् । आफूभन्दा अग्लो मूर्ति देखेर अचम्म मान्दै त्यसको तस्बिर लिइन् । र, एक सेल्फी पनि लिइन् । यो केको मूर्ति होला ? उनी अलमलिइन् र सोचेर भनिन्, ‘बुद्ध हो कि † चिनियाँ बुद्धजस्तो लाग्यो मलाई त ।’
ललितपुरको लाबिम मल पुगेकी बानेश्वर बस्ने प्रतिमा केसीलाई पनि यो मानवजस्तो देखिने मूर्तिबारे स्पष्ट जानकारी रहेनछ । उनले यो मूर्तिबारे साथीहरूबीच चर्चा चल्ने गरेको र यो यती भएको सुनेको बताइन् । यसको वास्तविकताबारे बुझ्ने इच्छा भएको समेत सुनाइन् ।
ठमेलको चोकमा राखिएको यस्तो आकृतिले धेरैको ध्यान तानेको छ । रंगीविरंगी अग्लो आकृति हेर्दै तस्बिर खिचाउने भीड नै लागेको छ । यो हो के ? भन्ने स्पष्ट नभए पनि यसको अनौठो शारीरिक बनोट, यसको शरीरमा कोरिएको कलाकारिता र यसबारे मानिसको फरक–फरक धारणाले धेरैबीच चर्चाको विषय बनेको छ । चर्चाको बीचमा खिचिएका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै बनेको छ ।
यतिबेला सिभिल मल, लाबिम मल, पाटन दरबार स्क्वायर, ठमेल एयरपोर्टजस्ता पर्यटकीय स्थलहरूमा यस्ता ठूला कलात्मक आकृति देख्न सकिन्छ । यसरी सहरका चोकहरूमा मुस्कुराइरहेका आकृति अरू केही नभएर हिममानव यतीका मूर्तिहरू हुन् । भिजिट नेपाल–२०२० लाई लक्षित गरी यतिबेला सहरमा यतीका मूर्तिहरू विस्तार भइरहेका छन् । हिममानवको सम्बन्ध हिमालसँग अत्यधिक हुने भएकाले यती पनि नेपालकै हो भनेर सावित गर्न यतीको मूर्ति विस्तार गरिएको बताउँछन्, भिजिट नेपाल–२०२० अन्तर्गत यती आर्ट कमिटीका संयोजक प्रेमप्रभात गुरुङ ।
उनका अनुसार बुद्ध र सगरमाथाका नामले नेपालले चिनेझैं यतीको इतिहास पनि नेपाल नै हो भनेर प्रचार गर्न यतीको मूर्ति विस्तार गरिएको हो । अहिले १ सय ८ यतीका मस्कटहरू निर्माण भइरहेका छन् । मस्कटलाई १ सय ८ कलाकारहरूले नै कला भरिरहेका छन् । मूर्तिहरू शान्त, सुन्दर, हँसिलो देख्न सकिन्छ । यतीको क्यानभासलाई नेपालका सांस्कृतिक पक्षहरूले सजाइएको छ । यतीमा तराई, पहाड र हिमालका संस्कृतिहरूलाई दर्शाउन खोजिएको छ ।
यती मस्कटको चित्र कोरेका हुन् कलाकार आङछिरिङ शेर्पाले । किंवदन्तीकै आधारमा यतीलाई परिभाषित गरेझैं उनले मस्कटको चित्र कोरेको बताउँछन् उनी । कहिल्यै नदेखेको यतीलाई चित्रमा उतार्न समस्या भएको सम्झन्छन् उनी । यती ठूलो डरलाग्दो भनेर सुनेकै आधारमा उनले चित्र कोरे । तर त्यो एकदमै ठुलो भयो । उनी भन्छन्– ‘पेन्टिङ र मूर्ति बनाउनका लागि भने त्यसलाई पछि मोडिफाई गरियो ।’
शेर्पाले कोरेको मस्कटलाई मूर्तिको आकार बनाउने काम गरेका हुन्, मूर्तिकार विजय महर्जनले । महर्जनलाई यतीका मास्टर पिस बनाउनका लागि पाँच दिन लाग्यो । उनका अनुसार मूर्ति बनाउन र पेन्टिङ गर्न सहज होस् भनेर दुई खुट्टाको बीचमा दुई हातसहितको यतीको मूर्ति निर्माण भएको हो । समूहको निष्कर्षअनुसार ७ फिटको यतीको मूर्ति निर्माण गरिएको उनी सुनाउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘ठूलो बनाउँदा सबैको ध्यान पुग्ने र तस्बिर खिच्नसमेत सहज हुने भएकाले ७ फिटको यतीको मूर्ति निर्माण गरिएको हो ।’ फाइबर ग्लासबाट निर्मित उक्त मूर्तिहरू ४५ देखि ५० केजीसम्म छन् । उनका अनुसार यतीको मूल्य भने पाँच लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि यती
प्रेमप्रभाव गुरुङ, संयोजक, यती आर्ट कमिटी
यती के हो ?
भिजिट नेपाल–२०२० मा यतीको मस्कट निर्माण गर्नुको उद्देश्य के होला ?
नेपाल हिमालयको देश हो । संसारभार यतीको विषयमा चर्चा छ । खोजी छ । महत्त्व छ । हामी सगरमाथाको देश, गोर्खालीको देश, खुकुरीको देश, बुद्धको देशजस्तै यतीको देश भनेर चिनाउन चाहन्छांै । यदि यती छ भने त्यो नेपालमा छ किनभने हिमाल भनेकै नेपालको हो भन्ने प्रचार–प्रसार गर्नका लागि मस्कट निर्माण गरिएको हो । नेपालीहरू पनि यतीका बारेमा जानकार हुनुपर्छ । विदेशीलाई पनि यतीमार्फत नेपालको परिचय दिन सक्नुपर्छ भन्ने हो । सन् १९५० तिर यती खोज्नका लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त लाइसेन्स लिनुपथ्र्याे । विश्वभरबाट यती खोज्न नेपाल आउने विदेशीहरू थुप्रै हुन्थे, तर यतिबेला नेपालमा भने यो अवस्था छैन । भिजिट नेपाललाई प्रचार–प्रसार गर्दा यतीलाई पनि नेपालको पहिचान छ भनेर चिनाउन खोजिएको हो ।
भिजिट नेपाल–२०२० सुरु भइसकेको छ । प्रचार–प्रसारमा यतीको मस्कटले कसरी सहयोग पुर्‍याएको छ त ?
अवश्य पनि पुर्‍याएको छ । अझै पुर्‍याउनेछ । यतीको मस्कट निर्माण भएसँगै छोटो समयमा धेरै चर्चा बटुलेको छ । १ सय ८ वटा मस्कट बनाउने हो । अहिलेसम्म ६० वटाको माग निश्चित भइसकेको छ । विदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने हालसम्म वासिङ्टन डिसीअन्तर्गत वल्र्ड बैंक, न्युयोर्क रुबिन म्युजियम, भुटानको थिम्पुले खरिद गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यतीलाई फैलाउन थप पहल गरिरहेका छौं ।
आममानिसको धारणाअनुसार यतीको स्वरूप बनेन भनिन्छ नि ?
सही कुरा गर्नुभो । यतीलाई सधैंभर नकारात्मक रूपमा हेरियो । ऊ डरलाग्दो छ । रिसाहा छ । नराम्रो छ यस्तै–यस्तै । तर, यस मस्कटमा नेपालको यती शान्त र सुन्दर छ । बलियो र धैर्य छ भनेर देखाउन खोजेका छौं । यति मात्रै होइन बुद्धको देशमा रहेको यतीले ध्यान पनि गर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेका छौं ।
यती कहाँ–कहाँ राखिनेछ ?
यती सार्वजनिक स्थानमा, मल, सपिङ सेन्टरहरूमा, विमानस्थलमा अहिले राखिएको छ । अब अन्नपूर्ण बेसक्याम्प र सगरमाथा बेसक्याम्पमा पनि राखिने योजना छ ।